Koox hubeysan oo dishay Darawal Gaari & faah faahin laga helay - Awdinle Online
Koox hubeysan oo dishay Darawal Gaari & faah faahin laga helay
Maleeshiyaad hubeysan ayaa weerar jidgal ahaa waxaa ay ku dileen Nin Oday ahaa oo darawal gaari ahaa, xili uu ku sugnaa degaanka la yiraahdo Caliyaal oo 18km dhanka Xuduudka ka xiga Degmada Caabudwaaq ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud.
Darawalka la dilay oo Magaciisa lagu sheegay faadhigo Ibraahim, ayaa ka mid ahaa darawaliinta caanka ah ee qaadka kasoo qaada dhanka Itoobiya.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dilka darawalka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dableyda hubeysan ay doonayeen inay jaadka ka dhacaan halka warar kale ay sheegayaan in aano qabiil loo dilay.
Laamaha Amniga degmada Cabudwaad weli kama hadlin dilkaas, iyada oo Darawalada kale ee jaadka ka keena dhinaca itoobiya ay sheegeen inay cabsoi soo wajahday, kuwaas oo halkaasi ka Shaqeysta.
Dilalka Darawalada Gaadiidka ayaa kusoo batay gobolada dalka, waxana dhawaan si kala gooni gooni gooni ah dawaliin loogu dilay degaano ka tirsan Gobolka Hiiraan, kuwaas oo dilkooda uu la xiriiray aanooyin qabiil.
Previous articleKulan dhexmaray Qoor Qoor iyo Beesha Caalamka
Next articleAl-Shabaab oo la wareegay degmo ka tirsan Shabeellaha dhexe